Malunga nathi | Hebei Huasheng Felt Co, Ltd.
Ukumboza indawo eyi-11,000sqm kwaye sinezityalo ezi-2, ngoku sivelisa iintlobo ezintathu zeemveliso:
Eyokuqala, Inaliti ephunyeziweyo yaziva, kubandakanya ivumba levumba, uziva uboya, ukuziva i-acrylic, ukuvaleka kwamehlo, ukuziva kwecarbon, ukuvakala kwe-PP.
Okwesibini, uboya obucinezwe baziva, kubandakanywa iphepha elaziva uboya, uboya baziva umqulu, uboya baziva umtya, njl njl.
Zintathu, iimveliso zokuposa emva, kubandakanya iPVC enamachaphaza e-anti slip, ukuziva zizono, ukuziva kuprinta, ukuziva ingxowa, ukuziva izihombiso, njl.
Inkampani yethu ineemigca yemveliso ehambele phambili ngokwamazwe aphesheya
imigangatho. Kwaye ine-laser cut, stamping, singeing, dipping kunye nezinye izixhobo zokusebenza. Izixhobo zokuvavanya zixhotywe ngoomatshini bedijithali, umtshini wombane we-elektroniki, isahluli, njl.njl, okuqinisekisa ngokupheleleyo ukuba iimveliso ziyahambelana neManyano yaseYurophu kunye neMelika.
Ukuza kuthi ga ngoku, inkampani yethu idlulile i-ISO9001 kunye ne-ISO14001 esemgangathweni yamazwe kunye nezatifikethi zenkqubo yolawulo lwendalo. Kwaye zonke iimveliso zigqithile izatifikethi ze-CE, RACH, RoHS, njl. Nge-TUV, SGS.
Ngamandla obalaseleyo e-OEM / ODM, umgangatho wesandi, uyilo olwenziwayo, ixabiso lokukhuphisana kunye nenkonzo ethembekileyo, siphumelele indumiso yoluntu ngokubanzi phakathi kwabalingani bethu behlabathi. Ukufumana ulwazi ngakumbi, qhakamshelana nathi ngoku.
Umboniso kunye notyelelo lwabathengi